Febraayo | 2015 | WEEJIDOW
Archive for Febraayo, 2015
Xawilaadihii Somaalida ee Dalka Maraykanka Oo Axadda Beri ah dib loo furayo
Febraayo 28, 2015
WAAJIDPRESS – 1 Mar 2015:
Waxaa Maalinta berri ah oo bisha Maarso 1 tahay dib u loo furayaa Xawilaadihii Soomaalida ee dalka Maraykanka oo asbuucyadii lasoo dhaafay Xayiraad lagu soo rogay u xirnaa, ka dib markii Merchants bank of California oo hayey Xisaabaadkooda uu xiriirka u jaray.
Arrintaan ayaa ka danbeysay kadib markii Gudi u dooda Xaquuqada Xawaaladaha Soomaalida ay dadaal dheeraad ah u galeen sidii Xaawaladaha Soomaalida ay Shaqooyinkoodii u bilaabi lahaayeen.
Guddoomiyaha Ururka SAMSA ee ay ku midaysan yihiin Xawilaadaha Soomaalida Cabdicasiis Sugule, oo BBC-da Wareysi siiyey ayaa sheegay in berri Xawilaaduhu dib u shaqo bilaabayaan.
War deg deg ah: Niman la socday gaari lagu daba jiray oo caawa ku qarxiyay Degmada Hodan
WAAJIDPRESS – 28 Feb 2015:
Ugu yaraan saddex nin oo la socday gaari nooca raaxada ah, ayaa waxay maqrinimadii ay gaarigaasi ku qarxiyeen inta u dhaxeyso xaafadaha Albaraka iyo NBC ee Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir.
Ciidamada Onkod oo ka tirsan Hay’adda Nabad Suggida Gobolka Banaadir, ayaa waxay gaarigaasi ka soo ceyrsadeen Isgoyska Black Sea ee Degmada Hodan, xilli gaarigaasi uu ahaa mid ay doon dooneysay Nabad Suggidu.
Saddexdii nin ee gaarigaasi la socotay, ayaa la soo sheegayaa in ay ka daateen, deetana ay gaariga ku qarxiyeen inta u dhaxeyso NBC iyo Albaraka.
Ka hor intii aynaan gaariga ka daadan, ayaa waxaa halkaasi laga maqlaayay rasaas ay isweydaarsanayeen Ciidamada Onkod iyo raggii la socday gaarigii lagu daba jiray.
Gudoomiyaha Degmada Hodan C/qaadir Cali Kullane, ayaa sheegay in saddexdaasi nin ay ka boodeen gaariga, isla-markaana ay qarxiyeen, xilli ay ku daba jooggeen Ciidamada Onkod.
Gudoomiyaha oo la hadlay WAAJIDPRESS, ayaa sheegay inaanu qaraxaasi waxyeelo ka soo gaarin Ciidamada Onkod, marka laga soo taggo dad rayid ah oo dhaawacyo kala duwan, ay ka soo gaareen, sida uu yiri.
Kullane, ayaa inoo sheegay in mid ka mid ah saddexdii nin ee Shabaabka ahaa, uu midkood si xun ugu dhaawacmay rasaastii lees weydaarsanaayay, isla-markaana ay gacanta ku dhigeen isagoo dhaawac ah, laakiin uu dhaawacii soo gaaray u geeriyooday.
Ciidamada Militariga, Nabad Suggida iyo Booliska Dowladda Somaliya, ayaa waxay xilligaan hawlgal ballaaran ay ka wadaan aagga uu qaraxu ka dhacay, oo laga baadi-goobaayo labada nin ee baxsadka ah.
Warar madax banaan, ayaa sheegaaya in tirada la socotay gaarigaasi, ay ka badan tahay saddexda nin ee Gudoomiyuhu uu sheegay.
War deg deg ah: ataano ahaa oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
2:30-kii duhurnimo ee maanta, ayaa waxaa laba qarax oo waaweyn laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah Magaalada Muqdisho, iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaaya in lala beegsaday gaadiid ay la socdeen Ciidamada Dowladda.
Qaraxyada, ayaa waxay ka dhaceen inta u dhaxeyso Warshaddii Barafuunka iyo Isgoyska SOS ee Degmada Heliwaa. Qaraxa hore waxaa lala beegsaday gaari Kaarib ahaa, halka qaraxa kalana lala eegtay gaari Cabdi Bille, oo la socday.
Qaraxyada oo siyaabooyin kala duwan u haleelay gaadiidkaasi, ayaa waxaa kan hore ku dhintay nin Sarkaal ahaa oo la socday gaarigii Kaarib ahaa, iyadoo kan kalana ay ku dhaawacantay ilaa saddex askari.
Ciidamada Dowladda oo durbaba ku baxay aagga uu qaraxu ka dhacay, ayaa waxay xireen wadooyinka halkaasi ku yaala, waxayna ka bilaabeen baaritaano ka dhan ah qaraxyadaasi.
Sarkaalka geeriyooday, ayaa waxaa la hadalhayaa in uu ka tirsanaa Hay’adda Nabad Suggida Gobolka Banaadir, inkastoo aanu Taliska Nabad Suggida Gobolka Banaadir taasi xaqiijin.
Sarkaal ka tirsan Maamulka Degmada Heliwaa, ayaa sheegay in qaraxyadaasi lala eegtay gawaari ay lee yihiin Ciidamada Dowladda, laakiin wax tafaasiil intaa dheer kama bixin.
War deg deg ah: Barre Hiiraale oo digniin culus u direy Odayaasha Doolow
Col. Barre Aadan Shire Hiiraale oo kamid ah garabka Mucaaradka Maamulka KMG Jubba, ayaa sheegay in shaqsi ahaan uusan aaminsaneyn Baarlamaan uu yeesho Maamulka Jubba.
Barre ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay Shirka ay wadaan Odayaasha taageersan Axmed Madoobe ee ka socda Deegaanka Doolow, waxa uuna sheegay in Natiijada kasoo baxda Shirkaasi uusan aqbali doonin.
Korneelka, ayaa ku goodiyay in Odayaasha ku shiraaya Doolow ay ku xisaabin doonaan Ciidamada Raaskambooni ee dilalka iyo dhibaatada ku heysa dadka degan Kismaayo.
Wuxuu sheegay in Odayaasha halkaasi tagay ay la mid yihiin kuwo dadkooda iyo dalkooda cadow Kenya u gacan geliyay waa sida uu hadalka u dhigaye.
Sidoo kale, Barre ayaa carabaabay in Odayaasha loo qaadi doono Kismaayo, islamarkaana markii halkaasi la geeyo laga bixi doono balamo dhowr ah oo looga qaaday Doolow.
Dhinaca kale, Col. Barre Hiiraaye, ayaa soo hadal qaaday in Hogaamiyaha MKG Jubba uu si cad uga weecday Heshiisyadii ay garwadeenka ka ahaayen DF Somalia iyo IGAD, kaasi oo ay ku wada gaareen Magaalada Kismaayo.
Ujeedka Shirka Axmed Madoobe iyo Odayaasha, ayuu ku sheegay mid lagu sii xoojinaayo hirgalinta maslaxada Kenya
Xog Cusub:- Maxaa Ka Run Ah In Faarax C/Qaadir Uu Ka Hor Istaagay Wasiiro Kulan La Lahaa M/Weyne Xasan Sheekh?
Warar holose oo lagu kalsoonana karo, ayaa waxay sheegayaan in Wasiirada cusub qaarkood ay cabasho kasoo gudbiyeen Wasiirkii hore ee Cadaalada Faarax C/qaadir, oo ah saaxiibka rumaad ee Xasan Sheekh.
Wark wuxuu intaas ku darayaa in Faarax C/qaadir oo saaxiib dhow la ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya uu hor istaagay kulamo u dhexeeyay Wasiiro iyo M/weynaha, taasi oo wasiirada ka carreysiiyey.
Sidoo kale, Faarax C/qaadir waxa uu Xoghayeenada M/weynaha ku amray inaan lasii deyn karin Wasiiro iyo wasiiro xigeeno howlo uga baahan Xafiiska Madaxweynaha, isagoona shuruud uga dhigay inay warqado kasoo qaatan Xafiiska Ra’isul wasaaraha waa haddii ay doonayaan inay qaabilaan Madaxweynaha.
Arrintaani ayaa waxa ay walaac ku noqotay Wasiirada Xukuumada R/W asaare CCC Sharmaarke oo badankooda aan horay u arag habdhaqanka Faarax C/qaadir mana jirto cid ilaa iyo iminka uga jawaab celisay sababaha keenay in laga hor istaago Xafiiska M/weynaha.
Tani ayaa waxa ay muujineysaa inay weli jirto Awooda Faarax C/qaadir oo aan xiligaani xil ka heyn DF Soomaaliya markii laga reebo saaxiibtinimada kala dhexeyso M/weyne Xasan Sheekh Maaxuud.
War deg deg ah: Xildhibaanada HAWIYE oo RW CC hordhigay Maanta Qorshe Yaab leh”MUQISHO Dad gaar ah ayaa leh ma ahan mid lawada sheegan karo”
Xildhibaano gaaraya illaa dhawr iyo labaatan xildhibaan ayaa la kulmey Ra’isulwasaare Cumar Cabdirashiid, waxayna kala hadleen sidii maamul loogu samayn lahaa gobolada Hiiraan, Shabeelada Dhexe iyo gobolka Banaadir.
Xildhibaan Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir oo waraysi siiyey Mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho ayaa sheegey in xildhibaanada ay ka mideysnaayeen arrimaha ay Ra’isulwasaaraha kala hadleen, isaga uu si wanaagsan oga dhagaystey ”Baryahanba waxaa xildhibaanada kasoo jeeda gobolada hiiraan iyo sh dhexe iyo banaadir intooda ku sugan muqdisho shirar, shirarkaasi oo ku saabsanaa sidii maamulo loogu samayn lahaa goboladaasi, waxaan kulan la yeelanay Ra’isulwasaaraha, waxaan kala hadalnay labao qodob oo kala ah maamuladaasi iyo arrimaha dagaalada, arrimahaasi oo aan ka xumaanay dagaalada, oo dagaalo waqtigooda ku haboon aanan ahayn, dagaaladana uu yahay dagaal siyaasadeed”.
Mar wax laga weeydiyay arrinka ku saabsan Muqdisho iyo sida laga yeelayo maadaamaa ay tahay caasimaddii dalka ayuu yiri xildhibaanka “Intee muqdisho ah horta, anaga waxaan ka hadlayno waa Muqdisho, Banaadir waa la yaqaano waa 17 degmo, dad baa inta aysan caasimad noqon ku noolaa, xuquuq ayay leeyihiin, tan dastuurka marka la meelmariyo ayaa la ogaanayaa inta maqaamka caasimadnimo leh, laakiin ka hor waa in dadkani xuquuqdooda laga tashadaa”.
War deg deg ah: Qarax gaari oo ka dhacay Degmada Wardhiigley iyo khasaaro kala duwan oo ka dhashay
Febraayo 27, 2015
WAAJIDPRESS – 27 Feb 2015:
Qarax miino oo lagu soo xiray gaari nooca raaxada ah, ayaa gelinkii dambe ee maanta ka dhacay Degmada Wardhiigley ee Gobolka Banaadir. Hal ruux waxaa la xaqiijiyay in uu ku dhintay, halka laba kalana ay ku dhaawacantay.
Xilli gaarigu maraayay Isgoyska Cali Kamiin, ayaa waxaa mar keliya laga dhex maqlay jug aad u xoogan, iyadoo uu ku dhintay ninkii gaariga kaxeynaayay, sidoo kalana waxaa ku dhaawacantay laba kale, oo gaariga la saarneyd.
Mid ka mid ah dadka deegaanka, ayaa sheegay inuu arkay darawalkii gaariga waday oo si xun ugu gubtay gaariga, waxaana meydkiisa la geeyay Saldhiga Booliska ee Degmada Wardhiigley.
Dhaawacyada labada nin ee kale, ayaa lagula cararay Isbitaalka Al Xayaat oo ku dhow Isgoyska Cali Kamiin, si wax looga qabto xaaladooda caafimadeed.
Ciidamada Amisom ee degan Garoonka Stadium Muqdisho, ayaa gaaray halka uu qaraxu ka dhacay, waxayna ka jiideen gaarigii qaraxa lagu soo xiray, oo ay geeyeen Saldhiga Wardhiigley. Gaariga waxaa ka muuqanaayay burbur.
Nabad Suggida iyo Booliska Degmada Wardhiigley oo muddo ka dib gaaray Isgoyska Cali Kamiin, ayaynaan ka samayn wax hawlgal ah, oo dad lagu soo qab qabtay.
Saddexda nin ee ku waxyeeloobay qaraxaasi, ayaa waxay xirnaayeen dharka shibilka, mana ka muuqan astaamo muujinaaya inay ka tirsan yihiin Shaqaalaha iyo Ciidanka Dowladda, midna.
Warar madax banaan, ayaa sheegaaya in gaarigaasi ay ka soo qaateen askari ka tirsan Hay’adda Nabad Suggida Gobolka Banaadir, iyadoona loo maleynaayo in qaraxaasi horey loogu soo xiray gaariga.
War farxad leh: Akhriso Warsaxaafadeed ka soo baxay Xafiiska DOWLAD GOBOLEEDKA Koonfur Galbeed ee lixda GOBOL oo AH u diyaargarowga xaflada maalintii la doortey Madaxweyne Madoobe Nuunow
WAAJIDPRESS- 27 Feb 2015:
Dhamaan shacabka koonfur galbeed soomaaliya ee 6 gobol meel walba ay joogaan waxaa lagu wargelinayaa iney u diyaar garoobaan xuskii xafladii 1aad oo la dooortey madaxweenaha dowlad goboleedka koonfur galbeedee soomaaliya 6 gobol Mudane Dr. Madoobe Nuunow Maxamed.
Xaflada Waxay ka dhici doontaa Caasimada dowlad goboleedka koonfur Galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo janaay iyo caalamka daafihiisa kale, taariikhdu marka ay tahay 3da maarso 2015 – Hoos ka Akhri Warsaxaafadeedka u diyaargarowga Xaflada:
Xog culus:-Xukuumadda cusub ee R/W CCC oo ay dhibaato weyn soo food saartay
Xukuumadda cusub ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay dhibaato weyn oo salka ku heysa dhaqaale daradii ugu ba’neyd iyadoo aanay jirin wax kharasha ah oo lagu wado howl maalmeedka wasaaradaha kala duwan ee xukuumaddu ka kooban tahay.
Sida ay sheegayaan xogo cusub waxaa xayiran inta badan howlihii iyo dhaqdhaqaaqyadii dowladda iyadoo xaalada dhaqaale ee ay dhaxashay xukuumadani ay noqotay tii ugu xumeyd xilligii Kumeelgaarka kadib.
Wasiirka cusub ee Maaliyadda iyo wasiir ku xigeenka wasaaradaasi ayaa xilka la wareegay iyadoo aanay wax lacag ah dowladda ugu jirin Bankiga Dhexe kadib loolan dheer oo siyaasadeed oo dhex maray madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaarihii hore oo loo aaneynayo in lacago badan lagu bixiyay mooshinkii xilligaasi lagu riday xukuumadii hore.
Ra’iisal wasaare Cumar C/rashiid ayaa dareemay culeyska dhaqaale iyo xaalada jaab marnaan ee ka jirta dakhligii xukuumada, waxaana u wehliya in looga tegay lacag deyn ah oo fara badan oo Ra’iisal wasaarihii hore ku wareejiyay, taasoo cadadkeeda la yaab ku riday Ra’iisal wasaare CCC.
Dhaqaale la’aanta heysata xukuumadda ayaa ku soo beegmeysa iyadoo hadda uun xilka la wareegtay, isla markaana bad-xiranka dartiis ay yaraan doonaan kharashka laga helo Dekadda Muqdisho oo ah isha ugu weyn ee ay ku nooshahay dowladda Soomaaliya.
War deg deg ah: Weerar Xalay Lagu Qaaday Guddoomiyaha Gobolka Bari ee PUNTALAND
Inta la og-yahay 1-Askeri oo ka tirsanaa ilaalada Gudoomiyaha G/Bari C/samad Maxamed Galan ayaa dhintay mid kalena waa dhaawacmay kadib markii xalay fiidnimadii ay kooxy Hubeysani weerar Bombo gacmeed ah ku qaadeen guriga uu magaalada Boosaaso ka degan yahay Guddoomiyaha G/Bari.
Guddoomiyuha G/ Bari C/samad Maxamed Galan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in uu gurigiisa ka maqnaa xiliiga uu weerarkaasi dhacay.
Kooxdii weerarka geysatay ayaa lagu soo waramayaa in ay baxsadeen, wuxuuna Guddoomiyuhu sheegay in ay wadaan baadi goobka ciddii falkaasi geysatay.
Daawo Muuqaal Gabdhihii dhalashada Ingiriiska watay ee Daacish u baxsaday & Turkiga oo sharci adag soo rogay.
Gabdho Iskuuley ah ayaa maalmo yar ka hor waxaa gacanta lagu soo dhigay iyaga oo u baxsaday kuna sii jeeday xoogaga Daacish kuwooda ka dagaalama gudaha dalka Siiriya waxeeyna Gabdhahaan wateen dhalashada Baasaboorka dalka Ingiriiska . (11)
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Febraayo, 2015.